टिकटक र सेल्फी स्वार्थमा हराएको मानवता, बुटवलको सिद्धेश्वर मैदानमा जे देखियो… – Kavrepati
Home / समाचार / टिकटक र सेल्फी स्वार्थमा हराएको मानवता, बुटवलको सिद्धेश्वर मैदानमा जे देखियो…
admin September 27, 2021	समाचार Leaveacomment 57 Views
बुटवल । हामी एम्बुलेन्स देख्दा बित्तिकै बिरामीको कल्पना गर्दछौं । अर्थात् पक्कै पनि त्यो भित्र कोही बिरामी छन् भन्ने आंकलन गर्छौै । कतिपयले त गुडिरहेको एम्बुलेन्सलाई दर्शन टक्राउँदै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछन् । तर, शनिबार बुटवलमा भने एम्बुलेन्स, एम्बुलेन्समा भएका बिरामीप्रति फरक दृश्य देखियो अर्थात् यो पंक्तिकारलाई फरक अनुभूति भयो। शनिबार दिउँसो बुटवल–८ मा अवस्थित सिद्धेश्वर खेल मैदानमा नेपाली काँग्रेस बुटवल उपमहानगरको नेतृत्व चयनका लागि चुनावी चहल–पहल थियो । नेतृत्व चयनका लागि प्रतिनिधि जितेर आएका मतदाताहरु गफिँदै ओहोर–दोहोर गर्नुका साथै खुला चौरमा चुनावी परिणामको समेत आँकलन गर्दै पलेटी कसिरहेका थिए ।
बिहान ११ बजेदेखि मतदान हुने भनेर बोलाइएका प्रतिनिधिहरु समयमै मतदान सुरु नहुँदा दिउँसो सभा १ बजेको चर्को घाममा पनि पर्खि रहेका थिए । सोही भिडको एक छेउमा लु १ च ५२४० नम्बरको एम्बुलेन्स खडा हुन आउँछ । उक्त एम्बुलेन्सले धेरैको ध्यान केन्द्रित गर्यो, सञ्चारकर्मीहरु पनि एम्बुलेन्सको फोटो खिच्दै अड्कलबाजी गर्न लागे ।
उनीहरुको जे अड्कलबाजी थियो विषय केही फरक थियो । धेरैको आँकलन काँग्रेसको नेतृत्व चयनका लागि एम्बुलेन्समा प्रतिनिधि ल्याइएको छ भन्ने थियो । वा भैपरी आउने स्वास्थ्य समस्या तथा उपचारका लागि पूर्वतयारीको पनि हुनसक्ने आंकलन थियो । तर, एम्बुलेन्स भित्र गुल्मीका ९४ वर्षिय वृद्ध थिए । उनी उपचारका लागि काठमाण्डौं जान हेलिकप्टरको पर्खाइमा थिए ।
करिब २० मिनेटको बसाईपछि बिरामीलाई लिएर उक्त हेलिकोप्टरले बुटवलको जमिन छाड्दै गर्दासमेत उक्त भिडले सेल्फि र टिकटकको काम सकेको थिएन। बुटवलको आकाशबाट टाढिदै गएको हेलिकोप्टरलाई अन्तिमसम्म ध्यान लगाएर हेरेको भिडमा कतीले ती वृद्ध बिरामीका बारेमा सोँचेका थिए होला ! यो अनुत्तरित प्रश्ननै रहयो । यसरी प्रविधिको विकासले केही मिनेटमै बुटवलका बिरामी काठमाण्डौं पुगेर उपचार गराउन पाउनु सकारात्मक भए पनि केही प्रविधिले मानवतालाई पनि भुल्ने गराएको हो की ?
Previous यी ५ युवती मध्ये कुन मनपर्यो ? एक छान्नुहोस र थाहा पाउनुस् आफ्नो व्यक्तित्व ।
Next यसरि ल्याण्ड गरेको थियो बुद्द एयरको जहाज भिडियो हेर्नुहोस